In ka badan 100 Qoraa oo Aqoontooda ku wadaaga Buugga Ganacsiga Fiican | Martech Zone
Isniin, Janaayo 23, 2017 Douglas Karr
Kawaran hadaad lahadli kartid 100 qof oo ganacsato ah oo aad lawadaagto waxa ugu badan ee talooyinka ay siiyaan? Tani waxay ahayd fikirka ka dambeeya Buugga Ganacsi Ka Wanaagsan, mashruuc ay soo diyaariyeen Tyler iyo kooxda at Nidaamka Is-daabacaada.
Muunad Buug Ganacsi Fiican
Dhamaan Cudurdaaradaada La Bixiyay: Laba Daraasadood oo Kiis ah oo cadeynaya inaadan u baahnayn khibrad, lacag ama caawimaad si aad u bilowdo ganacsi guuleysta - bog. 9
Kaliya Waxaad U Baahan Tahay Inaad Sax Noqoto Hal Mar - Mid Ka Mid Ah Fanaaniinta Ugu Waa Weyn Abid Abid Oo La Abuuray In Ka Badan 50,000 Kun Oo Noocyo Kala Duwan Ah Oo La Daabacay
Maxaad 'U Qabataa Waxa Aad Jeceshahay Lacaguna Raaci Doontaa' Waa Mid Ka Mid Ah Noocyada Ugu Xun Ee Talada Aad Weligaa Heli Doonto (Iyo Waxa Aad Sameyn Laheed Tahay Inaad Bedesho) - bog 17
Soo Saar Sababta Ka Dambaysa 99% Guuldarooyinkaagii Hore (Waad La Yaabi Doontaa Sida Fudud Ee Ay Tahay) Kadibna Adeegso Tan
Trick fudud si loo hubiyo inaadan waligaa ku curyaamin cabsi iyo culeys mar kale - bg. 32
7 Talaabo oo aan Raacay si aan uga sameeyo $ 500 Suzuki-kii iigu Horeeyay 10 sano ka hor (Hore u sii soco ilaa maanta) Weli waxaan qaadaa talaabooyinkan markasta oo aan doonayo inaan ku guuleysto wax weyn) - pg. 45
Ka Maqnaanshaha Fursadaha Sababtoo ah Khibrad La'aan? Casharkii aan ka Bartay Wakiilka Iibinta ee Cirbadaha ugu Muhiimsan ee Wadanka (oo si maldahan u ciribtiri kara irbad) Wuxuu iga caawiyey inaan dhiso ganacsiyo badan oo najaxay oo kuyaala meelo kaladuwan - Filim iyo TV ilaa Shukaansi - pg. 57
Mulkiilaha Makhaayada Faransiiska wuxuu shaqeeyaa 9 Maalmood Toos ah, wuxuu daboolayaa Shiftyo Dheeraad ah + Waqti dheeri ah oo ah $ 1800 Halka Martidiisa, La Taliyaha Dhaqaalaha, uu Sameeyo Lacag isku mid ah 35 Daqiiqo. Raadi waxa farqiga u sameeya (Tilmaam: Ma aha Darajadiisa) - bg. 60
Wanaagga, xumaanta iyo xumaanta ku shaqaysiga ganacsi khadka tooska ah ah - Baro sida loo arko wanaagga, la tacaali xumaanta, ka fogow xumaanta oo ku raaxayso daqiiqad kasta oo safarkaaga ganacsi ah - pg. 69 \_
Ha iloobin wixii aad ku baratay Dugsiga Ganacsiga - Taasi maahan sida habka iibku u shaqeeyo! Baro Sida Loo Isticmaalo Qaabka OSCAR ee Loo Xidho Heshiis Kasta Adigoon Ka Dhawaaqin Sida Ganacsade Xanaaqsan (Runtii, Waxaad Awood U Lahaa Inaad Ka Iibiso Ulaha U Jeedo Orodyahanka Olombikada) - pg. 77
Qalabkaygii ayaa loo xushay sidii cutub, Jooji Dhageysiga Qof walba, Halkaas oo aan kula wadaago casharka ganacsiga ugufiican ee shaqadayda oo sifiican looga bartay… sanad runti masiibo kadhacday hay'addeena. Waxaan qaatay go'aanno ganacsi oo runtii aad uxun. Maxaan bartay si aan shirkadda ugu soo celiyo wadada saxda ah? Maxaan samayn lahaa si ka duwan? Waxaan rajaynayaa inaad buugga iibsato oo aad aragto naftaada!
Iibso Buugga Ganacsi ee Fiican
Tags: buugga ganacsiga wanaagsantalo ganacsidouglas karrPublishingis-daabacaadjooji dhageysiga qof walba